China 5 n'ígwé A5 Matcha ute, 661A5, Self ịgwọ matcha ute rụpụta na Factory | Allwin
SElf na-agwọ A5 ịcha ute factory kpọmkwem
Matchacha ihe bụ otu n’ime ngwa ọrụ eji egwu akwụkwọ ga-akwadebe;
NTTA ỌD SEL Onwe Onye: Ikike ịgwọ onwe onye dị ịrịba ama na-eme ka ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịla n'iyi ma belata ugboro ugboro adịghị emetụta ya, na-enwe ebe dị larịị ma na-agbatị ndụ nke mpe mpe akwa na ịcha mma.
Inches & cm, Double-Sided ： Imperial na Metric na-eduzi dị elu nkọwa e biri ebi, iji hụ na ezi ziri ezi he na ọrụ dị elu oge ọ bụla.
AKW EXKWỌ KWESITYR: KWESITYR:: Na-enweghị atụ, na-enweghị mmịfe, ma nwee oke ogologo oge na agụba. Okpukpo nke 3mm na-eme ka ọ sie ike ma dịgide. Mgbanwe siri ike na nnabata dị mma, nke mere na ọ nwere ike gbagọọ n'echiche.
KWES APR AP KWES :R:: A na-egbutu ihe a kwesịrị ekwesị maka ụdị ederede na eserese, mpempe akwụkwọ aka, mpempe akwụkwọ nka, ịse ihe nkiri na-adịghị mma, Mpempe akwụkwọ, wdg. A pụkwara iji ya dị ka pad òké, ọ dịkwa mkpa maka ụmụ akwụkwọ, ezinụlọ na ọfịs .
Qualitydị Ihe Dị Elu Dị Elu Nke Na-agaghị Ekpu: feel nwere ike ịnwe obi ụtọ maka iji akwa mpempe akwụkwọ na-egbochi imegharị. Na-eme nnukwu onyinye maka ndị nkuzi, ndị ọrụ nka na akwa mkpuchi.
Ibu Nkebi 0.16kg kwa ibe
Product akụkụ 8,7 x 5,9 x 0,12 sentimita asatọ / 22 x 15 x 0,3 cm
Akwụkwọ ikike & Nkwado;
Product Akwụkwọ ikike: Ihu ọma a ga-enwe mgbe-sales nsogbu, anyị ifịk ifịk obibi ọ bụla mgbe-sales nsogbu na Nkwado mgbe ahịa nke ngwaahịa 1 afọ.
Nke gara aga: 5 oyi akwa A4 Matcha ute, 661A4, Self-agwọ Cutcha ute
Osote: 3 n'ígwé A1 tingcha ute, 883A1, Self agwọ healingcha ute